बिचार नै बीज हो र बीज नै बृक्ष
३१ भाद्र, २०७७ शीतलपाटीन्युज डटकम। 1116
बसन्त राज कुँवर।
दुइ साथी दिल्लीको आकासमा हेर्दै छौं। माथी बादल केही मडारीए झै भएर आयो लाग्यो पानी पर्न सक्छ।मैले साथीलाइ भनें पानी पर्ला जस्तो छ। साथीले भने “ पर्दैन यो बादल को गती धेरै छ। पानी पर्ने बादल यसरी छीटो हीड्दैन , स्थीर हुन्छ। यो बादलले पानी पार्छ भन्ने कुरामा हाम्रो राय मीलेन।
फेरी पनि २० तल्लाको बार्दलीमा बसेर कफी पीउदै हामी दुबै बादल हेरी रह्यौ। बादलको एउटा ठुलो चक्कामा मैले स्पष्ट सींहको स्वरुप देखें। मैले भने “ हेरत त्यो बादल सींह जस्तो छ ? उन्ले खुब नीयाले र भने मैले त सींह देखीन बरु सॉढें देंखे। हेर्नोस् त सीडं र जुरो पनी छ। मैले सॉढे हेर्न खोजे तर कतै सॉढे देखीन बरु अघीको भन्दा अली बीग्रीएको सींह नै देखें र उस्लाइ संझाउदै भनें उ त्यहॉ हेर टाउको कान मुख र घॉटीमा झुण्डीएका रौं समेत। हेर पुरा भाले सींह छ। उन्ले खुब हेरे र भने “उ हेर सॉढेको जुरो , स्पष्ट छ टाउकोमा सीङ पनी छ, उ ।
म सॉढे खोज्न थॉले उनी सींह। बादल त आफ्नो गतिमा थीयो। एक दुइ सर्को कफी पीएर हेर्दा त बादल त भालु पो भएछ। मैले भने हेर हेर त बादल भालु भयो। उन्ले हेरे र भने मैले त भालु होइन बरु ह्वेल माछा पो देखें। हेर त ह्वेल। पुच्छर चीरीएको छ।मैले ह्वेल हेर्न खोजे तर भालु नै देंखे। हामी फेरी एक अर्कालाइ भालु वा ह्वेलमा सहमत गराउन भीड्न थाल्यौ। त्यत्तीकैमा माथी हेरेको त बादल त राक्षस जस्तो पो भै सकेछ। मैले भने हेर हेर राक्षस स्पष्ट देखीयो। उस्ले राक्षस खोज्यो र भन्यो “त्यहा त मैले कमलको फुल" पो देखें। एकछीन फेरी भीड्यौ ।
सत्य यही रहेछ बस्तु एक कीन नहोस् हाम्रो दृष्टीकोण एउटै हुन् जरुरी रहेनछ। मेरो बिचार र अरुका बिचार मील्न पनी जरुरी रहेनछ। जुन बिचारले कसैको भलाइ गरी रहेको छ वा जुन बिचारले धेरैको भलाइ गरी रहेको छ ती बीचार पनी आलोचना रहीत हुदैनन् रहेछन। तर कालान्तरमा बिस्तार बिस्तार जब ती बिचारले धेरैको कल्याण हुन् थाल्दो रहेछ तब मात्र ती बिचारकहरुलाइ माहात्म्य, ज्ञानी बिद्वान र अन्तिम भगबानको अबतार समेत भनिदो रहेछ।
भगबानहरु पनि साधारण मानीस जस्तै थिए। तीन्ले पनी अनगीन्ती आलोचना र बिरोध खेप्थे। युद्धमा हार्दथे। श्राप पाएर कुश र हॉस भएर पनी बस्थें। महात्मा गान्धी र नेसनल मण्डेलाको जीबन पनी दुखैमा बित्यो। राम चन्द्र बनबास गए। क्राइष्टलाइ १७ दिन कीला ठोकेर मारीयो। शीबजीले श्रीमती गुमाइ पागल हुनु पर्यो। जुन भगबान हेर्यौ तिन्को जीबन दुखैमा बितेको छ फेरी ती भगबानसंग हामी शुख कसरी माग्ने ? तर पनी उनीहरु कालान्तरमा भगबान भए किनकी उहाहरुको सोच र दृष्टीकोण कल्याणकारी थियो। दुष्ट सोच राख्नेहरु राक्षस कहलिए।
जब जब दुइ बीच कुनै एक बिषयमा अलग अलग बिचार आउछ ती दुबै क्षणीक समयका लागी सही हुन्छन् । तर कालान्तरमा जुन बिचारले लोककल्याण गर्दछ, ती बिचारक प्रसंसाका पात्र हुन्छन्। कसैले जब कोहीबाट आफ्नो प्रसंसा पाउछन् ती पनी गमक्क पर्न जरुरी हुदैन किनकी यहा प्रसंसा गर्नु पर्दछ ती ब्यक्तीको जस्को दीमागमा कसैलाइ प्रसंसा गर्ने सोच आयो। प्रसंसा गर्ने ब्यक्ती प्रसंसा पाउने भन्दा महान छ तर यो पनी सत्य हो की त्यंही आज प्रसंसा गर्ने ब्यक्तीले नै भोली आज प्रसंसा गरेको ब्यक्तीको बिरोध पनी गर्न सक्ने छ। केबल प्रसंसा मन पराउने बानी बनाउनेहरुलाइ सानो बिरोधको पनी आत्माबल टुटाउन सक्छ।
मैले र साथीले २० तल्लाबाट हेरेको बादलका आआफ्नै आकृती जस्तै प्रसंसा बिरोध सब क्षणीक रहेछन्। हेर्ने ऑखा पीच्छे फरक फरक। सत्य यही रहेछ जीबन गतिशील बादल जस्तै छ र हाम्रा जीबन हेर्नेहरुको दृष्टीकोण फरक फरक हुन्छ।
जब हामी गतीसील हुन्छौ वा ध्वनी वा गन्ध सुगन्ध फ्यॉक्दछौं ,तब सबको ऑखा हामी तीर पर्देछ र अरुले हाम्रा संबन्धमा बादलको आकृतीका झै अलग अलग राय र बिचार राख्दछन् । ती असल वा ग़लत राय सुनेर गती वा ध्वनी बन्द गर्न जरुरी छैन, बादल जस्तै ।
प्रसंसा होस् वा आलोचना ,यी सामान्य हुन् । तर कालान्तरमा प्रसंसनीए बिचार तीनै हुन् जुन बिचारले केहीको वा धेरैको सरभाइबललाइ सकारात्मक सहयोग पुर्याउदछ। त्यसैले कसैलाइ बिद्वान,संत , महात्मा र भगबान पनि बनाउछ । तर तत्काल होइन त्यस्को नतीजा आए पछी। त्यस समय आउन केही महीना बर्ष वा धेरै बर्ष लाग्न पनि सक्छ । सत्य यही हो गतीशील हुन् र आफ्ना बिचार राख्न बन्द गर्नु हुदैन। बीचार नै बीज हो र बीज नै बृक्ष ।
छोटो मिठो मेरो बिचार : यसपालीको तिज